E-News Nepali || Fast and Accuracy » आमिर खानले खोले राज, ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ फ्लप हुँदा किन मागेका थिए माफी?
आमिर खानले खोले राज, ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ फ्लप हुँदा किन मागेका थिए माफी?
बलिउडका मिस्टर प्रफेक्शनिस्ट सुपरस्टार आमिर खान पछिल्लो समय फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ का कारण चर्चामा छन् । आमिरको पछिल्लो फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ बक्स अफिसमा पूर्ण रुपमा फ्लप भएको थियो । मल्टिस्टारर फिल्म हुँदा पनि फिल्मले कुनै कमाल देखाउन सकेन ।
आमिरले यो फिल्म फ्लप हुनुको पूरै जिम्मा आफूले लिँदै सबैसँग माफी पनि मागेका थिए । अहिले आएर आमिरले यो खुलाएका छन्, आखिर उनले किन माफी मागेका थिए ? हालै आमिरलाई सोधियो – फिल्म फ्लप हुँदा फ्यानसँग किन माफी माग्नुभयो? यसको जिम्मा तपाईंले किन लिनुभयो?
आमिरले भने – उनीहरुले मलाई सधै आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार महसूस गराउँछन् । पछिल्ला दुई दशक आमिरका कुनै त्यस्ता फिल्म आएनन्, जुन नचलेका होऊन् । आमिरले अगाडि थपे यो फिल्म बहुप्रतीक्षित फिल्म थियो । दर्शकलाई फिल्मप्रति धेरै आशा थियो । त्यसैले पनि मैले क्षमा मागेँ ।
मलाई लाग्यो कि, दर्शकको विश्वासमा म खरो उत्रिन नसकेकोमा मैले माफी माग्नुपर्छ । आमिरलाई सोधियो – असफलताबाट के सिक्नुहुन्छ? ‘असफलताले तपाईंलाई धेरै कुरा सिकाउँछ,’ आमिरले भने ।
प्रकाशित मिति ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १४:५६